Chihuahua Husky mix: Ndi ha di? You chọrọ otu? - Reeddịrị
Chihuahua Husky mix: Ndi ha di? You chọrọ otu?
Ọ bụrụ na ị na-eche, 'olee otu nke a ga-esi bụrụ?' - mara na ịnọghị naanị gị! Ngwakọta Chihuahua Husky, makwaara dị ka Husky-Chi ma ọ bụ Huskyhuahua , nwere ike iyi ihe na-agaghị ekwe omume, mana ha dị adị.
Ngwurugwu a mara mma bụ ngwakọta zuru oke nke ezigbo ọcha abụọ, Chihuahua na Siberian Husky. Ha nwere ọgụgụ isi, dị ike, ma ha ga-eme nnukwu mgbakwunye na ezinụlọ na-ahụ n'anya.
Na-ahụ n'anya Siberia Husky puppy na Chihuahua
Ekwetaghị anyị? Nọgide na-agụ!
Mmalite: Chihuahua nwere Husky?
Chihuahua na Husky mix dị ka?
Ọrụ na Egwuregwu: Husky-Chihuahua mix temperament
Na-elekọta obe Husky-Chihuahua mgbe ebubata ya n'ụlọ
Chihuahua Husky mix lifespan: Nke a bụ ezigbo ahụike?
Chichọta Chihuahua Husky mix puppy
Ngwakọta ndị ọzọ na-atọ ụtọ
Ihe ijuanya: lee ìgwè!
Ee, mana iji usoro eji eme ihe. A Huskyhuahua bu kere site na in-vitro fatịlaịza (IVF) ma ọ bụ insemination artificial (AI) ebe Siberia Husky bụ mama ahụ.
N'ihi oke ha, nwanyị Chihuahuas enweghị ike iburu ụmụ nkịta nke nwoke Husky. Ọ gaghị aba nkịta uru ọ bụla, ọ nwedịrị ike ịkpata ọnwụ.
E wezụga nke ahụ, akụkọ banyere nkịta a na-emepụta nke ọma edeghị nke ọma. Ihe anyị nwere ike ime bụ ịmụ gbasara nne na nna ya iji nye anyị na ndị nwere ike ịbụ ndị nwe anyị ịma ụdị ejiji na ọnọdụ Huskychi nwere.
Ndị nwere nkà na-arụ ọrụ Siberia Husky
Zute Siberia Husky nke na-agba ọsọ
Siberia Huskies bụ Fluffy na-arụ ọrụ na nkịta nke sitere na ezinụlọ Spitz ma si na Siberia.
Ọ bụghị naanị na a maara ha maka ịrụ ọrụ dị mkpa na nlanarị Chukchi, mana ha bụkwa ndị ama ama maka ọdịdị dị ebube na anya na-acha anụnụ anụnụ.
Resdị resili a bụ bred dị ka nkịta na-agba ọsọ na ndị na-agba ọsọ . Ewubere ha maka ntachi obi na ọsọ iji bufee ngwongwo na ụmụ mmadụ ha n'ofe ice.
Ọbụna na-arụsi ọrụ ike, Huskies nwere ọgụgụ isi ma na-egwu egwu canines.
Iguzo na sentimita 20 ruo 23 (51 ka 58 cm) n'ubu ma na-atụle 35 ruo 60 n'arọ (16 ruo kilogram 27), ha kwesịrị ekwesị maka ọrụ na dịka enyi na-eri nri. Siberia Husky nwekwara ọkwa 14 na AKC kachasị ewu ewu ndepụta nkịta.
Izute ụtọ na sassy Chihuahua
Ọ dị mma na onye isi Chihuahuas
Nkịta mba nke Mexico na nke kacha nta na uwa a na-ahụta oge ochie, o yikarịrị ka ọ ga-esi n'usoro Techichi.
Iguzo na sentimita 6 ruo 9 (sentimita 15 ruo 23 n'ogologo ma dịrị naanị kilogram 3 ruo 6) Chihuahuas bred dị ka ndị enyi. N'agbanyeghị na ha pere mpe, ha mara mma ma nwekwaa isi.
Ha bụ ihe atụ kachasị mma mgbe ị na-eche banyere canines ndị nwere Obere Nkịta ma ọ bụ ọrịa Napoleon .
Nke mbụ a bụ nke AKC ghọtara na 1905 site na AKC ma ugbu a bụ nke Otu egwuregwu .
Ọbụna a rụpụtara aha aha ahụ bụ 'nkịta pọọsụ' n'ihi otu ha si adị mfe ịbanye n'ime akpa ndị mmebe, dị ka na fim Iwu Blonde na Beverly Hills Chihuahua .
Ọ bụghị Ch ’niile bụ otu. E nwere ụdị Chihuahua abụọ - the Apple Isi na Isi Mgbada .
N'etiti ha abụọ, Apple Head Chihuahuas bụ naanị ụdị dị iche iche a nabatara na nkịta. Dịka ị ga-echeworị, ha nwere isi yiri apụl na mkpụmkpụ dị mkpụmkpụ.
Chihuahua Husky na-agwakọta agwa nke nne na nna. Ha nwere ike inwe acha anụnụ anụnụ, aja aja, ma ọ bụ ọtụtụ agba dị ka Husky, na a imi gbara ọchịchịrị na nti ntị .
Vidiyo a ga - eme ka ị mata ihe otu Huskyhuahua dị ka ya:
Size: Kedu otu nnukwu Husky Chihuahua ga-enweta?
Na nnukwu ọdịiche dị n’etiti nha nke Chihuahua na Siberia Husky, ụdị ngwakọ ụmụ ha ga-adabere na mkpụrụ ndụ ihe nketa nke nne na nna.
Ohaneze, nke a mbuaha ìgwè nwere elu nke 6 ruo 15 sentimita asatọ (15 ruo 38 cm), ma nwee ike ịtụle ebe ọ bụla 7 ka 15 pound (3 ruo 7 n'arọ).
Ha dị ka obere ma ọ bụ nkuzi nke Husky nwere ụkwụ dị mkpụmkpụ.
Dị ka a toy- ka obere-sized canine, a pooch ga-eme nke ọma na ulo, ma ha ga-eme nke ọma ma ọ bụrụ na ha nwere mbara èzí ma ọ bụ ohere zuru ezu ịgba gburugburu na aka ha.
Uwe Chi-Husky na agba
Dabere na nne ma ọ bụ nna Chihuahua nwere ogologo ntutu isi ma ọ bụ mkpụmkpụ, mgbe ahụ ya na nnụnnụ mmiri nwere okpukpu abụọ nke Siberia Husky, ụmụ ha agwakọtara ọnụ nwere ike nwee uwe dị nro nke dị mkpụmkpụ ma ọ bụ nke ọkara .
Chihuahuas nwekwara agba dị iche iche. Maka Huskyhuahua, ha nwere ike inwe ọcha, ojii, isi awọ, chọkọleti, ajị anụ, ma ọ bụ uwe aji, ebe ụfọdụ nwere ike ịbụ nchara nchara ma ọ bụ nwee agba atọ.
Fọdụ nwekwara ike ịnwe ihe nkpuchi Husky dị iche.
Chi-Husky’s nwere mmekọrịta nke ọma na nkịta na-ahụ n'anya. Ha na-eme ezigbo anu ulo, ma soso maka ndị nwere ahụmahụ nwere ụmụaka toro eto .
Fido a nwere ike ịchọta ụmụ aka na-egwuri egwu ma na-atọkwa ụtọ, nke nwere ike ime ha ọnyà ma taa. E wezụga nke ahụ, obere nkịta na-emebi emebi.
Site na nke ahụ, onye ọ bụla chọrọ inwe cutie a kwesịrị ịma otu esi emeso ndị isi ike, anụ ọhịa dị egwu n'ihi na nke ahụ pụtakwara ọchịchọ ime ihe ike .
Enwere n'ezie ọmụmụ banyere mkparị canine na-ekwu banyere Siberia Huskies na Chihuahuas ndị na-eduzi nkịta ndị ọzọ, ụmụ mmadụ ha, na ndị bịara abịa.
Ọ bụ ya mere o ji dị oke mkpa ka ụdị nnwere onwe dị ka Huskyhuahuas nwee mmekọrịta ma zụọ azụ n'oge o kwere mee iji hụ na ha tolitere na omume ga-eme ka ha bụrụ ezigbo anụ ụlọ.
Maka ozi ọma ahụ, Chi-Huskies bụ incredibly ọgụgụ isi , ekele diri nne na nna. Huskies dịkwa oke amamihe ma mara ịbụ ndị mgbapụ mgbapụ.
Ọ bụrụ na i meghị nwee ogige na-enweghị nsogbu ma ị nwere obe a ma ọ bụ na ị na-eme atụmatụ ịnweta otu, malite ịtọ ya.
'Ma ọ bụ na nkịta ndị isi anaghị esiri ike ịzụ?' Ọ bụghị mgbe niile. N'ebe onye nwere aka nke maara ihe ga-esi jiri ịnụ ọkụ Chihuahua Husky mee ihe dị ụtọ n'oge ọzụzụ, ekwesighi ịwepụta.
Tinye na ole na ole na-emeso na mma mkwado, a pooch nwere ike ijide ngwa ngwa.
Gụnye nrubeisi na ọzụzụ crate iji belata omume ọjọọ. Otu ihe mgbochi ị nwere ike izute bụ ọzụzụ dị ka Chihuahuas nwere nsogbu na ya.
Kwadebe onwe gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ụdị a dị iche iche dị ka onye òtù ezinụlọ ọhụrụ gị. Zụlite ha chọrọ ọtụtụ ịhụnanya, oge, na ndidi.
Ọ kachasị mma ịtụle ebe ibi, yana. Idtụle ndị mụrụ ya, ngwakọ a ga-eme nke ọma na ebe ọ dị jụụ ma ọ bụ dị ọkụ n'ihi na ha agaghị anagide oke ihu igwe.
Kedu ihe ọzọ ị kwesịrị ịdị njikere maka?
Ndụmọdụ n’idozi Huskyhuahua gị
Chihuahua Husky mixes abụghị hypoallergenic, mana ha anaghị awụfu dị ka Huskies na-eme. A na-atụle ha ndị obere na-ajụ ọkara chọrọ nchapu kwa izu .
N'oge ịwụfu oge, mee ya ugboro ugboro, opekata mpe ugboro abụọ ruo ugboro atọ n'izu.
Ma ejiji ejiji ga-adabere n'ụdị ụdị uwe enyi enyi gị ketara.
A ga-enye bat naanị mgbe ọ dị mkpa iji zere ihicha ntutu nke anụ ụlọ gị ma wepụ ya na mmanụ ya. Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị ghara ịsa Chi-Husky gị n'oge ọnwa oyi ma ọ bụrụ na ọ ga-apụ n'èzí ụbọchị ahụ.
Mee ka ọ ghara ịjụ oyi site na iji a draya , karịsịa ma ọ bụrụ na doggo gị nwere ogologo aji.
Lelee ma hichaa ntị ya kwa izu iji hụ na ha kpọkwara nkụ, dị ọcha, na ọrịa na-enweghị ọrịa. Echefukwala idozi mkpịsị aka nke anụ ụlọ gị mgbe niile ma na-ehichapụ ezé ya. Ezé eze nwekwara ike inyere aka na nhicha ọnụ nwa gị.
Udia fo Chi-Husky
Nkịta ndị a chọrọ elu-edu nkịta nri , ọkacha mma ndị nwere ezigbo anụ, mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, na obere ihe mgbakwunye .
I kwesịkwara ịtụle ibu arọ Huskyhuahua, afọ ndụ ya, metabolism, na ahụ ike ya mgbe ị na-achọ ịchọpụta ihe na otu esi azụ ya.
Nwere ike iji nke a kalori mgbako iji gbakọọ Chihuahua & Husky cross gị chọrọ caloric kwa ụbọchị.
Ebe ọ bụ na Huskies nwere ike ibute nsogbu hip na nkwonkwo, mmeju nri Chi-Husky gị na mmanụ azụ, chondroitin, na glucosamine.
Olee ụdị mmega ahụ́ ha chọrọ?
Onye nkịta a chọrọ ọ dịkarịa ala minit 30 ruo awa elekere kwa ụbọchị . Chọghị igosipụta Huskyhuahua gị maka na ọ gaghị enwe ike ma ọ bụ etiti dịka Siberia Husky.
E wezụga nke ahụ, nne na nna Chi ya na-adịkarị mfe brachycephaly , nke pụtara na ha nwere ike ịnwe nsogbu iku ume na ọrịa iku ume n'ihi mkpụmkpụ ha.
Enwere ọtụtụ ihe omume ị nwere ike ịhapụ onye nwere ajị anụ na-atọ ụtọ, dị ka njem gaa ogige nkịta, ịgagharị gburugburu, ma ọ bụ ọbụlagodi oge igwu egwu na mbara èzí.
Naanị jide n'aka na ngwakọta Husky a anaghị anọ ogologo oge n'okpuru anyanwụ, ọkachasị n'oge ọnwa ọkọchị.
Ọ bụrụ na ọ bụ ụzọ na-ekpo oke ọkụ, debe Chihuahua Husky mix gị n'uche na itinye aka site n'inye ya a Kong ata toy , zoo ma chọọ ụfụ , na egwuregwu mgbagwoju anya .
Ngwakọta ụdị dị iche iche na-enwe ahụike karịa nne na nna ha dị ọcha n'ihi ngwakọ ngwakọ . Siberia Husky & Chihuahua cross nwere afọ ndụ nke afọ 12 ruo 16.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ kachasị mma ịmara nsogbu ahụike ha nwere ike inweta site na Huskies na Chis. Fọdụ n'ime ọrịa ndị ahụ bụ:
Na-aga n'ihu Retinal Atrophy (PRA)
Trachea trachea - Nke a bụ ihe na - akpata mgbochi ikuku na nsonaazụ na -
Hip dysplasia - Nke a bụ ọnọdụ ọkpụkpụ nke na-emetụta nkwonkwo pup. Ọ na-agbakarị n'ọtụtụ ụdị buru ibu, mana ọ nwere ike ime nkịta ọ bụla. Ebe ọ bụ na Huskies bụ nkịta buru ibu ma na-enwekarị nsogbu n'okwu a, ChiHusky gị nọkwa n'ihe egwu.
Ndị na-azụ ihe na-akwụkarị ụgwọ $ 500 karịrị $ 1,000 maka ụmụ nkịta a. Gwọ iku ụgwọ nwere ike ịdị $ 50- $ 100. Ndị na-azụ ihe na-ebo ya okpukpu iri.
Achọpụtabeghị m ndị na-azụ akwụkwọ ikikere ọ bụla nwere ntụkwasị obi, mana tụlee ịchọ ụlọ na ụlọ ọrụ ikuchi maka nwa gị!
Chi-Husky breeders & nnapụta
Nnapụta Yankee Chihuahua
Nke abuo Chi
Nkịta a bụ crossbreed nke Doberman Pinscher na Siberia Husky. Ha nwere ike iburu kilogram 40-90 ma guzo na 22-26 sentimita asatọ n'ịdị elu. Ha na-eguzosi ike n'ihe ma na-echebe ndị nwe ha ma na-akpachara anya maka ndị bịara abịa.
Ndabere nke pup a bụ na ọ na-enwekarị ikewa nkewa n'ihi oke ịkpa ha-ha mkpa ịnọ ebe ị nọ n'oge niile.
Nwa a mara mma bụ obe n'etiti ụdị abụọ: Great Dane na Siberian Husky. Nke ahụ kwuru, nkịta a ga - abụ otu nwa oke (ihe ruru 130 pound). Ulo– ma ọ bụ ọbụna obere ụlọ– nanị agaghị egbutu ya maka nwoke a.
Ha nwere onwe ha, isi ike, na ọ bụghị nnukwu na anụ ụlọ ndị ọzọ. Ma amaara ha maka iguzosi ike n'ihe ha nye ndị nwe ha ma nwee ezigbo ndụ ruo afọ 12.
Onye na-akụ ọkpọ Husky
Umu anumanu abuo ndi mejuputara obe a di n’udi ya, ya mere nkpuru ya di nfe kari ibu amuma. Nke a ga-abụ nwa na-egwuri egwu ma na-echekwa ma na-amụ anya nke nwere ike banye na nsogbu ma ọ bụrụ na ahapụghị ya.
Ha na-eme nkịta ezinụlọ, dị ka ụmụ anụmanụ abụọ dị mma na ụmụaka. Ogologo ndụ ha dị ihe dịka afọ 9-15.
Bọọlụ a na-efu efu nwere ike ibu 60-100 pound wee guzo na sentimita 22-28. Ha na-akpa àgwà sitere na nne na nna nke mejupụtara omume enyi ya, egwuregwu ya. N'adịghị ka ụdị ndị a dị n'elu, ha dị mma na ndị bịara abịa.
Ha dịkwa oke mma na ụmụaka, na-ahụ n'anya, ma nwee ọgụgụ isi. N'elu ala, ha chọrọ ọtụtụ mmega ahụ na ejiji iji mee ka ha nwee ahụike ma nwee obi ụtọ.
Kwesịrị ịmeghe oge iji nwee otu n'ime ụmụ okorobịa ndị a.
Ọ bụrụ na ị hụrụ ịtụnanya n'anya, ikekwe ị gaghị eche banyere ọdịdị na-enweghị atụ nke ngwakọta Chihuahua Husky.
Na umu anumanu abuo di iche, o siri ike ikwu otu Chi-Husky ga-esi adi ma obu ghari. Otu ihe doro anya: pups ndị a nwere ọgụgụ isi, na-ahụ n'anya, ma jide n'aka na ha ga-eme ka ụlọ gị maa mma site na ike egwuregwu.
Ọ bụrụ na ị bụ onye nwe ụlọ mbụ, Chi-Husky abụghị maka gị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị maara nke ọma na ike siri ike, ụdị sassy, ​​ma eleghị anya ọ bụ naanị ihe ị chọrọ!
3 ofdị Ọrụ Nkịta
Australian Shepherd Lab Mix - Aussiedor Owner’s Guide
kedu ụdị nkịta m nwere
aha dị jụụ maka nkịta ọcha
nwa nkita rottweiler ojii
nkịta m na -enwe mmetụ aka
ụmụ nkịta husky na gold retriever